Ihowuliseyili i-48V 1000W enamandla eCarbon Fibre yombane weTire yeNtaba yeBhayisikile yoMvelisi kunye noMthengisi | IIMI
I-48V 1000W enamandla e-Carbon Fibre yombane wamafutha iTire Bike yeNtaba
I-FIMO yinkqubo yokusebenza yokumiswa ngokupheleleyo ye-e-bhayisekile igcwele ngezinto eziphezulu zomgangatho. Ngeebraki zedisk zeTektro ezomeleleyo eziqhotyoshelwe kwisakhelo sefayibha yekhabhoni, awuyi kuba nexhala malunga nokuba uzifumana ukwimeko yokuncamathela. Ukuvavanywa rhoqo kwiindawo ezahlukeneyo ezahlukeneyo, aziyi kukuyekela. Heck, ezi zomelele, kangangokuba kuya kufuneka uchithe ixesha uhlengahlengisa ukubamba kwabo! Ngomatshini we-1000W onokufikelela kwi-28mph, uya kuthi, ngaphandle kwamathandabuzo, uthabathe amasimi ngokulula kunye nomoya kwizinwele zakho.
Eyona moto inamandla ye-1000w
I-FIMO inikwe amandla yimoto eyi-1000W ekuvumela ukuba ufikelele kwisantya esiphezulu se-28 mph. Kuba i-torque eveliswe yimoto yi-160Nm, uya koyisa ngokulula iinduli ezincinci. Kananjalo oku kuya kubonelela ngesiqalo esomeleleyo kunye nokukhawulezisa okugudileyo
Ukurhoxiswa kweBrand enkulu
I-ROCKSHOX ihlala ingukumkani wamalungu okumiswa. Inomtsalane kubuchule bokuhlengahlengisa kwentwasahlobo yomoya kunye noxinzelelo kunye nohlengahlengiso oluphindaphindiweyo kulungelelwaniso lokuhamba kulo naluphi na umzila okanye imeko. Ngoku ngokubonelela ngeMaxima Plush fluid yokuziva bhetyebhetye, abakhweli banokucofa ngokulula kwindawo efanelekileyo.
Ukhozi lwe-Gx lwenza i-Super Star
IGX Eagle liqabane lakho kuko konke ukukhwela, ngalo lonke ixesha, imini yonke. Iintsuku ezinde, ukukhwela ngokukhawuleza nayo yonke into ephakathi, i-GX Eagle yinkqubo yezinto eziphilayo kwindawo yayo. Ngalo lonke uluhlu olutsha lwama-520%, zonke ii-colourways ezintsha kunye nokuhambelana okungagungqiyo nayo yonke inkqubo yendalo, i-GX Eagle ikhona ukuze ikhulise amava akho okukhwela.
Ikhasethi entsha yamazinyo eyi-10-52 yamazinyo i-GX Eagle cassette yabakhweli ababeka phambili umsebenzi wosuku ngaphezu kwayo nayiphi na enye into. Ngokwandiswa, iipesenti ezingama-520 zepesenti yokunika abakhweli ithuba lokujikeleza kunye nokubuyela kwindawo enyukayo, kunye noyilo oluvulekileyo olunceda ukucocwa kodaka, ukunika abakhweli ukusebenza okutshintshayo kunye nobomi bexesha elide.
I-48V 14Ah ibhetri yeselfowuni ilinganiswe ngexabiso le-500.
I-52V, i-3 Amp itshaja efanelekileyo, isebenza kwiivenkile zamandla ze-100V-240V AC
Isilawuli esiSebenzayo esingu-48V 30A singene kwimoto.
Ukuboniswa kwe-LED enemibala kunye nenqaku lokuchonga ngokulula kunye nezibuko lokutshaja i-USB.
I-1000 Watt yamagama
I-Tektro Auguria, i-203mm Disc Brake Rotor
I-Tektro Auguria Disc ene-203 Rotors, i-Finger-Finger Levers ene-Motor Inhibitors kunye nokuFikelela okuLungelelanisiweyo
I-SRAM EAGLE 126L
BAFANG Aluminium Ingxubevange, zakha
I-GX EAGLE 12S Derailleur
I-CST 26 * 4.0 -Ipunist Resistant
Egqithileyo 48V 750W Super enamandla Verstile Fat ukudinwa Electric Cargo Bike
Okulandelayo: I-China yonke indawo ene-high-power kunye nokusebenza okuphezulu kwebhayisekile yombane
Ikhabhoni yeCarbon Ebike
Ibhayisekile yokusonga yeCarbon
Ibhayisikili yeCarbon Fibre Hybrid
ICarbon Fibre Mtb
Iibhayisikile zendlela yeCarbon
Ibhayisikili yokuKhwela kwiKhabhoni
Isakhelo sendlela yeBhayisikile yeBhayisikile